वार्षिक राशिफल - साक्षी खबर वार्षिक राशिफल - साक्षी खबर
बैशाख ०३, २०७८ | २८५ पटक पढिएको
यो वर्ष साँढेशाति शनिदशा निम्न राशिहरुलाई रहने छ ।
१. मिथुन र तुला राशि – बर्षभरि अढैया शनिदशा
२. धनु राशि – वर्षभरि अन्त्य साँढेसाति शनिदशा
३. मकर राशि – वर्षभरि मध्य साँढेसाति शनिदशा
२. कुम्भ राशि – वर्षभरि आद्य साँढेसाति शनिदशा
अढैया, अन्त्य, मध्य र आद्य साँढेसाति शनिदशा भए पनि आफ्नो जन्मकुण्डलीमा स्वगृही, मित्रगृही उच्च राशि, र ३, ६, ११ स्थानमा शनि भएको भए शनिको नकारात्मक फल लाग्ने छैन ।
मेष राशि हुने वाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहनेछ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल रहनाले आर्थिक क्षेत्रमा निकै उन्नति र प्रगति हुनेछ । उद्योग व्यवसायहरु, शेर बजारहरु निकै फस्टाउने छन् । कृषक वर्ग श्रमिक वर्गमा उत्साह थपिने छ । नगदे वालीले मनग्य फल दिनेछ । विद्यार्थी वर्गमा अध्ययन क्षेत्रमा सफलता, नोकरीमा पदोन्नति, वैदेशिक काममा भने केही ढिलासुस्ती, कलाकारितामा उत्साहवद्र्धक सफलता, पत्रकारितामा जस अपजस दुवै समानरुपाम फल पाइने । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता तर राजनैतिक क्षेत्रमा भने चिन्ता, प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो रहला । घरमा मौलिक कार्यहरु हुनेछन्, धार्मिक कार्यमा रुचि बढने छ । सन्तान र पारिवारिक जीवनमा सुख मिल्नेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराब देखिन्छ स्वास्थ्यकर्र्मीलाई पनि बढी दौडधूप गर्नुपर्ने छ । अन्य क्षेत्र सामान्य रहने छ ।
वृष राशि हुने वाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष सामान्य फलदायी रहने छ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल र प्रतिकूल रहनाले आर्थिक क्षेत्रमा उतार चढाव हुनेछ । कृषकवर्गमा पंक्षी व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषि जन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने मिश्रित फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा निकै फलदायी रहने छ । कलाकारितामा उत्साहवद्र्धक सफलता, पत्रकारितामा भ्रमण सम्मान फल पाईनेछ राजनीतिक र कूटनीतिकमा अति राम्रो सफलता पाइने छ । प्रेम विवाह, धार्मिक कार्यमा, यात्रा उत्सव, लगायत सबैमा राम्रो सफलता मिल्ने छ । सन्तान र पारिवारिक जीवनमा सुख मिल्ने छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराब देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्र्मीलाई राम्रै होला ।
मिथुन राशि हुने वाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष मिश्रित फलदायी रहने छ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल र प्रतिकूलका साथै अढैयाँ शनिदशा वर्षभरि रहनाले आर्थिक क्षेत्रमा उतार चढाव हुनेछ । कृषकवर्गमा पंक्षी चौपाय व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । तर यातायात क्षेत्रमा अलि कठिनाइ भोग्नु पर्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने उत्तम फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा निकै अपजस खप्नु पर्ने छ । पत्रकारितामा निकै फलदायी रहने छ । सामाजिक क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा भने निकै चिन्ता उतार चढाब हुनेछ । प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो रहला । घरमा मांगलिक कार्यहरु हुनेछन्, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराब देखिन्छ । पेटको समस्या बढी आउला । स्वास्थ्यकर्र्मीलाई पनि बढी दौडधूप गर्नुपर्नेछ, अन्य क्षेत्रहरु राम्रै भए पनि ।
कर्कट राशि हुनेवाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष मध्यम फलदायी रहने छ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल रहनाले आर्थिक क्षेत्रमा निकै उतार चढाव साथ सफल हुनेछ । कृषक वर्गमा नगदे बालि व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषि जन्य पशु, पंक्षी व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने राम्रो फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा निकै उत्साह थपिने छ । पत्रकारितामा निकै फलदायी पदोन्नति हुने छ । सामाजिक क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा भने निकै सोचेभन्दा राम्रो हुनेछ । प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो रहला । घरमा मांगलिक कार्यहरु हुनेछन् धार्मिक यात्रा, यातायात सबैमा राम्रो रहने छ । । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराब देखिन्छ । पेटको साथै दीर्घ रोगले सताउला समस्या बढी आउला । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बढी परेसानि खप्नु पर्ने छ अन्य क्षेत्रहरु राम्रै भए पनि ।
सिंह राशि हुने वाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्तम फलदायी रहने छ । आर्थिक क्षेत्रमा निकै उन्नति र प्रगति हुने छ । उद्योग व्यवसायहरु निकै फस्टाउने छन् । कृषकवर्ग श्रमिक वर्गमा उत्साह थपिने छ । नगदे वालीले मनग्य फल दिने छ । विद्यार्थी वर्गमा अध्ययन क्षेत्रमा सफलता, नोकरीमा पदोन्नति तर अपजस पाइने छ । वैदेशिक काममा भने केहि ढिलासुस्ती, कलाकारितामा उत्साहवद्र्धक सफलता, पत्रकारितामा उत्कृष्ट फलपाइने छ । यातायात क्षेत्रमा मनग्य आम्दानि हुने छ । जग्गा दलाली कारोबारमा चिन्ता बढ्ने छ । पारविारिक, धार्मिक, प्रेम, सन्तानलगायत क्षेत्रमा राम्रो रहने छ । सामाजिक क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा भने निकै सोचेभन्दा राम्रो हुनेछ । शत्रू बढे पनि जित तपाईको हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराब देखिन्छ । पेटको साथै दीर्घ रोगले सताउने, समस्या बढि आउला । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बढी परेसानि खप्नु पर्नेछ । अन्य क्षेत्रहरु राम्रै भए पनि ।
कन्या राशि हुनेवाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष सामान्य रहने छ । उद्योग कलकारखाना यातयात क्षेत्रमा उतारचढाब आएता पनि अन्य क्षेत्रमा उत्तम फलदायी रहने छ । आर्थिक क्षेत्रमा निकै उन्नति र प्रगति हुने छ । तर नसोचिकन लगानि गर्दा कसैले धन खाने योग छ । सचेत रहनु पर्ने छ । उद्योग व्यवसायहरु निकै फस्टाउने छन् । कृषकवर्ग श्रमिकवर्गमा उत्साह थपिने छ । कृषकवर्गमा पंक्षी चौपाय व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । तर यातायत क्षेत्रमा अलि कठिनाइ भोग्नु पर्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने सजिलै काम बन्ने छन् । नोकरीमा पदोन्नति, हुनेछ । कलाकारितामा उत्साहवद्र्धक सफलता, पत्रकारितामा जसअपजस दुवैसमान रुपमा फल पाइने । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता तर राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भने चिन्ता, प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो रहला । घरमा मांगालिक कार्यहरु हुनेछन्, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने छ । सन्तान र पारिवारिक जीवनमा सुख मिल्ने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराब देखिन्छ स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बढी परिश्रम गर्नु पर्ने छ ।
तुला राशि हुने वाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष वृहस्पति र अढैयां शनिदशा रहनाले मध्यम फलदायि रहने छ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल र प्रतिकूलका दुवै वर्षभरि रहनाले आर्थिक क्षेत्रमा उतार चढाव हुनेछ । कृषकवर्गमा पंक्षी चौपाय व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । तर यातायात क्षेत्रमा अलि कठिनाइ एवं आर्थिक संकट भोग्नु पर्ने छ । वैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने उत्तम फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा हाकिमको निकै अपजस खप्नु पर्ने छ । पत्रकारितामा निकै फलदायी रहने छ । सामाजिक क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा भने निकै चिन्ता उतार चढाब हुनेछ । प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो रहला । घरमा मांगलिक कार्यहरु हुनेछन्, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने छ । धार्मिक यात्रा अधूरै रहला दलाली कार्य एवं ठेक्का पट्टा । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराबी धन खर्च हुने देखिन्छ । पेट, नसा एवं मानसिक समस्या बढी आउला । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बढी परेसानी गर्न भोग्नु पर्ने छ । अन्य क्षेत्रहरु राम्रै भए पनि ।
वृश्चिक राशि हुने वाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष उत्तम फलदायी रहने छ गोचरका ग्रहहरु अनुकूल रहनाले उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्रमा उन्नती प्रगति हुनेछ । कृषकवर्गमा जल खेती, पशुचौपाय नगदे बाली एवं होटल व्यवसायमा मनग्य आम्दानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषि जन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने मिश्रित फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा निकै फलदायी रहने छ । कलाकारितामा देश विदेशको भ्रमण यात्रा उत्साहवद्र्धक सफलता रहने छ । पत्रकारीतामा जसअपजस दुबैसमान रुपमा फल पाईने छ राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशाशनिकमा अतिराम्रो सफलता पाइने छ । प्रेम विवाह, धार्मिक कार्यमा, यात्रा उत्सव, लगायत सबैमा राम्रो सफलता मिल्ने छ। सन्तान र पारिवारिक जीवनमा सुख मिल्ने छ स्वास्थ एवं यातायात क्षेत्रमा पनि आंशिक सफलता हात पार्न सकिने छ । भने केही खराब देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रै होला । अन्य क्षेत्रहरु सामान्य रहने छन् ।
धनु राशि हुनेवाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष अन्त्य शाढेशति शनिदशा रहनाले हरक्षेत्रमा उथलपुथलका साथै आंशिक फलदायी रहनेछ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल र प्रतिकूलका दुवै वर्षभरि रहनाले आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा उतार चढाव आउने छ । कृषकवर्गमा पंक्षी चौपाय व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । तर यातायात क्षेत्रमा अलि कठिनाइ एवंं आथिक संकट भोग्नु पर्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा एवं शेरबजारमा भने उत्तम फलदायी रहने छ । विद्यार्थीवर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा हाकिम अन्य व्यक्तिको निकै अपजस खप्नु पर्ने छ । पत्रकारितामा निकै फलदायी रहने छ । सामाजिक क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा भने निकै चिन्ता उतार चढाब हुनेछ । प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा राम्रो मध्यम रहला । घरमा मांगलिक कार्यहरु हुनेछन्, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । धार्मिक यात्रा अधूरै रहला दलाली कार्य एवं ठेक्का पट्रटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खराबी धन खर्च हुने देखिन्छ । पेट, नसा एवं मानसिक समस्या बढी आउला । स्वास्थकर्मीलाई पनि बढी परेसानी भोग्नु पर्ने छ । अन्य क्षेत्रहरु राम्रै भए पनि ।
मकर राशि हुनेवाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष मध्य शाढेशाति शनिदशा रहनाले हरक्षेत्रमा राम्रा नराम्रा कार्यहरुको आंशिक फलदायी रहने छ । गोचरका ग्रहहरु अनुकूल र प्रतिकूलका दुवै वर्षभरि रहनाले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा उतार चढाव आउने छ । कृषकवर्गमा पंक्षी पशुपालन व्यवसायमा केही हानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । तर यातायात क्षेत्रमा अलि कठिनाइ एवंं आर्थिक संकट भोग्नु पर्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने उत्तम फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा केही चिन्ता भए पनि राम्रो रहने छ । नोकरीमा हाकिम अन्य व्यक्तिको निकै अपजस खप्नु पर्ने छ । पत्रकारितामा निकै फलदायी रहने छ । सामाजिक क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा भने निकै चिन्ता उतार चढाब हुनेछ । प्रेम, दाम्पत्य जीवनमा मध्यम रहला । घरमा मांगलिक कार्यहरुमा अवरोध हुनेछन्, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्ने छ । धार्मिक यात्रा अधूरै रहला दलाली कार्य एवं ठेक्का पट्टा शेर बजार साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही खरावी धन खर्च हुने देखिन्छ । पेट, नसा एवं मानसिक समस्या बढी आउला । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि लाभ हानी दुबै भोग्नु पर्ने छ अन्य क्षेत्रहरु राम्रै भए पनि ।
कुम्भ राशि हुनेवाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष उत्तम फलदायी रहनेछ गोचरका ग्रहहरु अनुकूल रहनाले उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्रमा उन्नती प्रगति हुनेछ । कृषकवर्गमा जल खेती, पशुचौपाय नगदे बाली एवं होटल व्यवसायमा साथै फलाम, शेर बजारबाट मनग्य आम्दानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने मिश्रित फलदायी रहने छ । विद्यार्थीवर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहने छ । नोकरीमा पदोन्नती साथै निकै फलदायी रहने छ । कलाकारितामा देश विदेशको भ्रमण यात्रा उत्साहवद्र्धक सफलता रहने छ । पत्रकारीतामा सोचे अनुरुप फल पाईनेछ । राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिकमा अतिराम्रो सफलता पाइने छ । प्रेम विवाह, धार्मिक कार्यमा, यात्रा उत्सवलगायत सबैमा राम्रो सफलता मिल्ने छ । सन्तान र पारिवारिक जीवनमा सुख मिल्ने छ स्वास्थ एवं यातायात क्षेत्रमा पनि आंशिक सफलता हात पार्न सकिने छ । तर मनमा आंशिकरुपमा भय डर त्रास चिन्ता लागि रहनेछ । स्वास्थ्यमा केही खराब देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रै होला । अन्य क्षेत्रहरु सामान्य रहने छन् ।
मीन राशि हुनेवाला व्यक्तिहरुका लागि यो वर्ष उत्तम फलदायी रहने छ गोचरका ग्रहहरु अनुकूल रहनाले उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्रमा उन्नती प्रगति हुनेछ । कृषक वर्गमा माछा पालन पशुचौपाय नगदेबाली एवं होटल व्यवसायमा साथै फलाम, शेर बजारबाट मनग्य आम्दानी हुने देखिन्छ भने अन्य कृषि जन्य व्यवसायमा आंशिक सफलता मिल्ने छ । बैदेशिक स्वदेशिक श्रमिक वर्गमा भने आंशिक फलदायी रहने छ । विद्यार्थी वर्गमा भने पढाइ लेखाइमा राम्रो रहे पनि चिन्ता बढ्ने छ । नोकरीमा पदोन्नति साथै निकै फलदायी रहने छ । कलाकारितामा देश विदेशको भ्रमण यात्रा उत्साहवद्र्धक सफलता रहनेछ । पत्रकारितामा सोचे अनुरुप फल पाइएता पनि शत्रु बढ्ने छन् । राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिकमा अति राम्रो सफलता पाइने छ तर अख्तियारबाट जोगिनु होला । प्रेम विवाह, धार्मिक कार्यमा, यात्रा उत्सवलगायत सबैमा राम्रो सफलता मिल्ने छ । पुत्र सुख र पारिवारिक जीवनमा सुख मिल्ने छ स्वास्थ एवं यातायात क्षेत्रमा पनि आंशिक सफलता हात पार्न सकिने छ । स्वास्थ्यमा केही खराब देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रै होला । गुमेको धन समेत प्राप्त होला अन्य क्षेत्रहरु सामान्य रहने छन् ।